Gelbiskii Geerida- 6aad - Abdikadir AskarAbdikadir Askar
Gelbiskii Geerida- 6aad
Posted on December 16, 2017 by Abdikadir Askar
Muddo kadib waxa aan ku biiray ciidanka bilayska Kanada, waxa aanan ka noqday xubin ka hawlgasha qaybta denbi-baadhista Kooxda 55aad ee Badhtamaha Magaaladda Toronto.
Waxa aan noqday askari si foojigan uga qayb-qaata baadhista denbiyada la xidhiidha la-dagaalanka maandooriyaasha ee bulshada madow oo aan markii danbe ku helay dallacaado badan.
Lix bilood ayaa galbaday, annaga oo aan dareemin sida xawliga leh ee waqtigu u rooray. Abshir waxa la soo daayey isaga gadh weyn la baxay, aadna u tabar-darnaaday. Wejigiisa waxa laga dheehan karayey uur-xumo iyo murugo badan. Wuxuu ahaa nin dareenkiisu maqan yahay oo haasawaha aad u dhibsanaya. Halkii baana ugu danbaysay waxbarasho. Jaamacaddiina kuma laaban mar danbe.
Abshir wuxu si tartiib-tartiib ah iskugu badalay gooni-socod. Waxa ka soo hadhay muran iyo hadalo cadho wata. Waxa ku adkaatay in uu la jaanqaado noloshii qoyskaga. Wax kastaba waxa ay u noqdeen wax cusub. Wuunna dhibsanayey habka aan u noolayn. Markii uu maqlay in aan la hawl-galo ciidanka Kanada aad ayuu u sii cadhooday. Waxa aan ula muuqday nin ka gaaloobay diinta Islaamka. Marar badan ayuu i maagay, anigu se waxa aan u arki jiray walaalkayo in uu dabeecad-xumo kala soo baxay saldhiggii uu ku xidhnaa.
” Show dulli maad dooran maanta? Oo maad noqon addoon ay gaalladu raranayso? Waadiga maantaba cadowgii Alle la shaqeeya,” ayuu igu diriray.
Hadaladda Abshir waxa ay ahaayeen kuwo dhanbiilo ka boodayaan. Waxa uu isku laaqayey wacyi-diimeed iyo aragtiyo-nololeed oo si qalafsan loo hal-abuuray.
Anigu dhagba jalaq uma siin. Iskumana lurin. Waxa aan lahaa dulqaadkeeda. Waayo waxaa qiyaasi karayey in noloshii walaalkayo soo maray wax weyn ka badashay hab-dhaqankiisii.
Abshir, wuxuu aad ugu jeellanaa in uu ila dagaalamo. Si lama filaan ahna ayuu mar qudha kabtiisii ula baxay dabadeedna dhankayga u soo tuuray.
Maalintaas wixii na dhex-maray ma uusan ahayn wax na farax galiey. Wuxu ahaa dareen aanan mahadin. Abshirna gurigii ayuu ka guuray isaga ii cadhaysan. Wuxuu nagu sii tiraabay dad dhaqan xun oo aan maskax fiican lahayn.
Abshir, mar danbe warkiisii ma aanan helin. Waxa aan warbixintiisii u gudbiyey ciidanka Kanada, wax jawaab ahna kama aan helin.
Muddo dheer kadib, waxa aan raad-raaciisa ka soo helay ardaydii Suudaaniyiinta ahayd ee ay saaxiibka ahaayeen. Kuwaas oo ii sheegay in Abshir u safray dalka Mareykanka.
Hooyaday aad ayay ii canaanatay dudmada Abshir. Waan u garaabayey hooyaday. Laakiin walaalkayo keligayo nama necbaan, wuxu aad u dhibsaday nolosha dalka Kanada taallay oo dhan oo uu u arkayey mid dhaqankeedu xun yahay oo aanay jirin cadaallad iyo sinnaan.
Tegitaankii Abshir waxa ay igu kaliftay in aan iska casilo jagadii aan ka hayey ciidanka denbi-baadhista ee Toronto. Waxa aan u anba-baxay dalka Mareykanka, aniga oo sita sawirka walaalkay.
Waxa aan u gudbiyey xafiiska federaalka ee denbi-baadhista Mareykanka. Xog-waraysi dheer bay ila yeesheen aniga oo dhawr jeer noq-noqonayey xafiiskooda magaalada Boston. Sawirka Abshir waxa geliyeen habka raadinta ee Mareykanka. Dhawr jeerna waxa laga baahiyey warbaahinta maxaliga ah ee dalka, cid soo sheegtayna ma aysan jirin.